eHimalaya Online || News from nepal » ऐश्वर्या राय घण्टौं सम्म पि, डा भए पनि सामान्य डेलिभरि चाहान्थिन ।, किन सबैजना सामान्य डेलिभरी चाहान्छन् त?
ऐश्वर्या राय घण्टौं सम्म पि, डा भए पनि सामान्य डेलिभरि चाहान्थिन ।, किन सबैजना सामान्य डेलिभरी चाहान्छन् त?
२०७७ पुस २३ गते बिहिबार ०३:१०
ऐश्वर्या राय बच्चनले छोरी आराध्या बच्चनलाई जन्म दिन धेरै क,ष्ट भोग्नु परेको थियो । यद्यपि उनले सी-सेक्शन(सर्ज,री) गरिनन आखिर किन ? जबकि डाक्टरहरूले पनि उनलाई सी-सेक्शन गर्न सल्लाह दिएका थिए । आखिर, किन ऐश्वर्या राई सी-सेक्शनबाट बचिरहेकि...
ऐश्वर्या राय बच्चनले छोरी आराध्या बच्चनलाई जन्म दिन धेरै क,ष्ट भोग्नु परेको थियो । यद्यपि उनले सी-सेक्शन(सर्ज,री) गरिनन आखिर किन ? जबकि डाक्टरहरूले पनि उनलाई सी-सेक्शन गर्न सल्लाह दिएका थिए । आखिर, किन ऐश्वर्या राई सी-सेक्शनबाट बचिरहेकि थिईन्, जबकि आज धेरैजसो महिलाले सी-सेक्शन मन पराउँछन् ।
३५ पछि जरुरी हुन्छ सिजेरिएन महिलाहरू विश्वास गर्छन् कि सामान्य डेलिभरी ३५ वर्षको उमेर पछि हुन सक्दैन, जबकि यस्तो हुदैन । ऐश्वर्या राई बच्चन ३७ वर्षकी थिइन जब उनले आराध्यालाई जन्म दिइन् । यद्यपि डाक्टरहरूले उनलाई सी-सेक्शनका लागि सुझाव दिएका थिए ।
सामान्यतया यो देखिएको छ कि सबै डाक्टरहरूले उमेर छिप्पिदै गरेका आमा बन्न गइरहेका महिलाहरूलाई सी-सेक्सन सिफारिस गर्छन्, जब यो सहि हुँदैन । ऐश्वर्या राईले धेरै महिलाहरुलाई प्रेरणा दिएकी छिन् कि ३५ पछि पनि सामान्य डिलिभरी गर्न सकिन्छ । ऐश्वर्याले सामान्य डेलिभरी गरिन किनभने यसका धेरै फाइदाहरू छन् ।
सामान्य डेलिभरी गरेका महिलाहरू सी-सेक्सन(सर्ज,री) गरेका महिलाहरू भन्दा छिटो स्वस्थ हुन्छन् ।
सामान्य डेलिभरीको केहि घण्टा पछि, महिलाहरू आफ्ना खुट्टामा उभिन सक्छन्, केहि हिंडन सक्छ्न । तिनीहरूलाई यो काम गर्नको लागि कसैको समर्थनको पनि आवश्यक पर्दैन ।
प्रस,वको समयमा, महिलाको शरीरमा एन्डो-रफिन भन्ने हा,र्मोन निस्कन्छ, जसले पीडा कम गर्दछ र शरीरलाई पीडासँग डिल गर्न मद्दत गर्दछ ।
सामान्य प्रस,वको तुलनामा पुन: प्राप्ति गर्न सी-सेक्सन भएका महिलाहरूलाई ४ देखि ५ हप्ता लाग्छ । आन्तरिक टाँकाहरू पुनःप्राप्ति गर्न ६ महिना सम्म लाग्द्छ यस समयमा, महिलालाई जहिले पनि मेडिकल ध्यान चाहिन्छ ।
किनकि, सामान्य डेलिभरीमा धेरै सानो वा का,टिएको जस्तो देखिन्छ र त्यहाँ कुनै आन्तरिक घा,उ हुदैन, महिलाले लामो समयसम्म पीडा सहनु पर्दैन । जबकि सी-सेक्सन गर्दा दु,खाई लामो समयसम्म रहिरहन्छ।
सामान्य डिलीवरी हुँदा सं,क्र मणको धेरै कम जो,खिम हुन्छ, जबकि सिजेरियन डेलिभरीले गर्दा घाउको सं,क्र मण हुन सक्छ । यससँगै, ग-र्भा शय र मू-त्र पथमा सं,क्र मण हुने ख,तरा हुन्छ ।
महिला सामान्य डेलिभरि पछि धेरै चाँडो सामान्य हुन्छन । जीवनशैलीमा राम्रो परिवर्तन गरेर जस्तै नियमित रूपमा मसाजहरू पाउँदा, शरीरलाई बल प्राप्त हुन्छ ।
जब शरीर रिकभरी गर्न थाल्छ, दिमाग पनि खुशी हुन्छ तर यस्तो सी-सेक्सन भएका महिलाहरूमा हुदैन ।
उनीहरूको ग-र्भा,शय पूर्ण रूपले निको हुनको लागि तिनीहरूले कुर्नु पर्छ । उनीहरूलाई राम्रो हेरचाह चाहिन्छ जब सम्म उनीहरू पूर्ण रूपमा निको हुँदैनन् ।
प्रकाशित मिति २०७७ पुस २३ गते बिहिबार ०३:१०